Maamuus 9X iyo 9X Pro: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista rasmiga ah | Androidsis
Dhowr toddobaad ka hor taariikhda xaraynta ayaa la muujiyay ee Sharafta 9X. Toddobaadyadan waxaa jiray warar xan ah oo ku saabsan in taleefankan uu kaliya ku dhacayo suuqa iyo in kale. Ugu dambeyntiina, maadaama ay suurtagal ahayd in la ogaado dhowaan, munaasabaddan waxaa jiri lahaa laba nooc. Marka lagu daro qaabka caadiga ah waxaan helnaa 9X Pro. Labadan taleefan ayaa horeyba si rasmi ah loo soo bandhigay.
Sharafta 9X iyo 9X Pro ayaa loo soo bandhigay sida cusboonaysiinta heerka dhexe ee astaanta Shiinaha. Laba taleefan oo awood leh, oo leh qeexitaanno wanaagsan oo sidoo kale leh qiime aad u hooseeya. Isku-dhaf iyaga ka dhigaya iyaga si aad ah loogu jecel yahay suuqa. Oo waxaan horeyba u ogaanay wax walba oo iyaga ku saabsan.
Labada nooc waa isku mid dhinac walba. Marka laga hadlayo naqshadeynta, sumadda Shiinaha waxay u adeegsatay kamarad laga rogi karo wejigeeda, si aan u aragno sida shaashadu uga faa'iideysanayso wejiga hore ee taleefanka. Dhabarka dambe waxaan ku kala duwanahay, maaddaama hal nooc uu ku yimid laba kamarad iyo mid kale oo saddex leh. Mid ka mid ah farqiga yar ee u dhexeeya labadooda.
Maamuusku wuxuu muujiyaa taleefannada ay yeelan doonaan Android Q
1 Maamuus 9X iyo 9X Pro Sooc
Maamuus 9X iyo 9X Pro Sooc
Heer farsamo waan arki karnaa taas waxaa jira faraqyo yar oo u dhexeeya Honor 9X iyo 9X Pro. Ka sokow kaamirooyinka gadaal, RAM-ka iyo isku-darka kaydinta ayaa ku kala duwan labada taleefan. Laakiin iyagu waxay nooga tegayaan isla nashqad kastoo ay doontaba ha noqotee qeexitaankooduna waa joogto. Laba moodel oo shaki la’aan sifiican ula kulmaya waxa aan ka filan karno astaanta maanta. Kuwani waa qeexitaankiisa buuxa:
SHARAF 9X PRO
6,59 inch LTPS LCD oo leh xallin
FullHD + at 2.340 x 1.080 pixels 6,59 inch LTPS LCD oo leh xallin
FullHD + at 2.340 x 1.080 pixels
Kirin 810 oo ay la socoto Mali G52 MP6 GPU Kirin 810 oo ay la socoto Mali G52 MP6 GPU
Kordhinta MicroSD ilaa 512GB 8GB / 128GB
Kordhinta MicroSD ilaa 512GB
48 Xildhibaan leh fur f / 1.8 + 2 Xildhibaan 48 xildhibaan leh fur f / 1.8 + 8 MP + 2 MP
16 xildhibaan leh fur f / 2.2 16 xildhibaan leh fur f / 2.2
Android 9 Pie oo leh EMUI 9.1 oo ah lakab habeyn ah Android 9 Pie oo leh EMUI 9.1 oo ah lakab habeyn ah
Akhristaha sawirka faraha Akhristaha sawirka faraha
Gram 206 X x 163,1 77,2 8,8 mm
Astaantu waxay noo soo bandhigeysaa laba taleefan oo ay kala yihiin Waxay uyimaadeen inay dagaal badan kubixiyaan bartamaha. Sida aan aragno, labada moodel waxay lamid yihiin laba dhibic oo biyo ah, oo ay ku kala duwan yihiin kaliya labo kala duwanaansho weyn oo ku saabsan qeexitaanadooda, kuwaas oo ah kamaradaha iyo RAM iyo noocyada keydinta. Marka waxay noo soo bandhigayaan laba nooc oo si wanaagsan loo qeexay, laakiin khilaafaad gaar ah leh.
Honor 9X waa kan ugu caansan, oo leh laba kamarad gadaal ah kiiskaaga. Dareemaha ugu muhiimsan waa 48 MP wuxuuna adeegsadaa 2 MP labaad. Xaaladda 9X Pro, dareeraha saddexaad ee 8 MP ayaa lagu daraa dhexda iyaga. Marka waxaan heli doonnaa fursado badan markaan sawir qaadno. Kaamirooyinka labada taleefan ku yimid waxay ku shaqeynayaan sirdoon macmal ah, oo loogu talagalay ogaanshaha muuqaalka iyo qaabab sawir dheeri ah kiiskan. Farqiga kale ayaa ah isku-darka RAM iyo keydinta, taas oo ku jirta qaabka Pro-ka xoogaa ka awood badan 8 GB RAM ah.
Haddii kale ma jiraan wax khilaaf ah oo u dhexeeya labadaas. Waxay nooga tagayaan awood wanaagsan oo ah 4.000 mAh, taas oo shaki la'aan siin doonta dadka isticmaala ismaamul wanaagsan. Maxaa intaa ka badan, isticmaal Kirin 810 ahaan processor ahaan, jab ah in Huawei si rasmi ah loo soo bandhigay bishii Juun ee sanadkan. Marka Honor 9X-kan ayaa noqday kuwii ugu horreeyay ee adeegsada processor-kan. Tani waxay ahayd wax la isla dhexmarayay toddobaadyo, sidaan horeyba kuugu sheegnay, oo way rumowday.
Sidaan ku aragnay qeexitaannada, waxaan ka helnaa dhowr nooc oo Honor 9X iyo 9X Pro ah, iyadoo kuxiran RAM-keeda iyo keydintooda. Hadda, labadan nooc ayaa lagu soo bandhigay Shiinaha, oo ah suuqa kaliya ee lagu xaqiijiyay inuu bilaabmay. In kasta oo la filayo in toddobaadyo yar gudahood laga bilaabi doono Yurub sidoo kale, kaliya in aysan jirin taariikh xilligan.
Marka laga hadlayo Sharafta 9X waxaan heleynaa saddex nooc ka duwan taleefoonka. Qiimahooda horey loo xaqiijiyay ee suuqa Shiinaha waa sida soo socota:
Nooca leh 4/64 GB waxaa lagu qiimeeyaa 1.399 yuan (qiyaastii 181 euro in la beddelo)
Qaabka 6/64 GB wuxuu ku kici doonaa 1.599 yuan (qiyaastii 207 euro in la beddelo)
Nooca leh 6/128 GB waxaa lagu qiimeeyaa 1.899 yuan (qiyaastii 246 euro in la beddelo)
Iyadoo Honor 9X Pro wuxuu naga tagayaa laba nooc oo kala duwan, oo qiimaheeda la xaqiijiyay ee Shiinaha ay yihiin sida soo socota:
Nooca leh 8/128 GB wuxuu leeyahay qiimo dhan 2.199 yuan (qiyaastii 285 euro in la beddelo)
Qaabka leh 8/256 GB waxaa lagu qiimeeyaa 2.399 yuan (qiyaastii 311 euro in la beddelo)
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Maamuus 9X iyo 9X Pro: Nooca cusub ee bartamaha
Xiaomi waxay jabisay liiska Fortune Global 500 markii ugu horeysay
Vivo Z5 horeyba waxay u laheyd taariikh sii deyn waxayna leedahay sawirro rasmi ah